Nagarik Shukrabar - जहाँ बसोबास त्यही जिल्लाको अदालतमा फिराद
शनिबार, २७ असार २०७७, ०२ : १९
जहाँ बसोबास त्यही जिल्लाको अदालतमा फिराद
बुधबार, ०४ भदौ २०७६, ११ : ०७ | शुक्रवार
मैले प्राइभेट ल फर्मको सहयोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको अपिल गरेकी छु। कानुनी प्रक्रियाको निम्ति अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र चाहिने रैछ। म ललितपुर जिल्लामा बस्छु। मेरो घर धनीले बहाल कर तिर्नु भएको छैन। मैले अस्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र पाउन सकेकी छैन। मैले चिनेका घर धनीहरुले बहाल कर तिरेका रैनछन्। म संखुवासभाको स्थायी बासिन्दा हुँ। मैले शंखुवासभाको प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सक्छु ? यदि सकिँदैन भने के विकल्प होला ?
कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कारबाही सुनुवाइ र किनारा गर्न कानुनबमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुन्छ। अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुुनुवाइ, आदेश वा निर्णय बदर हुन्छ।
अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानुनअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्छ। मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ बमोजिम मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रुपमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँधसम्बन्धी मुद्दा र फिराद पत्रबाट घर,जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नुपर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।
अंश मुद्दा हो भने वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि हुन्छ र जुन जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुन्छ।
तपाईंको अधिकारक्षेत्र भनेको तपाईँ अथवा तपाईँको श्रीमान् बसोबास गर्ने जिल्लाको जिल्ला अदालत नै हो।
प्रश्नअनुसार तपाईं ललितपुर जिल्लामा बसोबास गर्नुहुन्छ। कुन आधारमा तपाईं काठमाडौँ जिल्लाको अस्थायी बसोबासको सिफारिस माग्दै हुनुहुन्छ ? जहाँ अस्थायी बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यही जिल्लाको अस्थायी बसोबासको सिफारिस लिएर उक्त जिल्लाकै जिल्ला अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । तपाईँले प्रश्नमा तपाईंको श्रीमान् कहाँ बस्नु हुन्छ भन्ने कुरा खुलाउनु भएको छैन। तपाईंको संखुवासभाको स्थायी बासिन्दा भएको आधारले तपाईंले फिराद त्यही जिल्लामा दायर गर्नुपर्ने हो तर अहिले ललितपुरमा भएको कारणले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न खोज्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन।
ललितपुरमा बसेर काठमाडौंको अस्थायी बासिन्दा हुँ भनेर अस्थायी बसोबासको सिफारिस खोज्नु नै गलत देखिन्छ। तपाईं ललितपुर जिल्लाको अस्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ भने मुद्दा पनि ललितपुर जिल्ला अदालतमै दायर गर्नुपर्छ।
पहिलो कुरा संखुवासभाको स्थायी बासिन्दा भएकोले त्यहाँको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर संखुवासभामा फिराद दायर गर्न पाइन्छ, काठमाडौंमा पाइँदैन। काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि काठमाडौंमै अस्थायी बसोबास गरेको सिफारिस पत्र आवश्यक हुन्छ।
तपाईंले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गएर सिफारिस लिनुपर्छ। तपाईं के कारणले काठमाडौंमा बस्दै आउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि प्रश्नमा स्पष्ट छैन। प्रश्नमा तपाईंले चिनेजानेको कसैले पनि घर, जग्गा, बहाल कर तिर्नु भएको रहेनछ भन्दा अचम्म लाग्यो। कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र अनिवार्य पनि।
घर बहाल कर नतिर्नु अहिले समस्याकै रुपमा रहेको छ। घर बहाल कर तिरेको रसिदअनिवार्य गर्नु यही समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ल्याइएको प्रावधान हो। कानुनी प्रावधान जसरी भए पनि पूरा गर्नै पर्छ । अस्थायी बसोबासको सिफारिस लिने अन्य कुनै उपाय छैन।